Il est où le bonheur?? Betsaka no diso fijery amin'ity resaka bonheur ity!! - 1er Pas - Transformez ce rêve en realité
Ny conseil-ko eto dia azo ampiarina amin’ny fiainan’ny mpivady, fiainan’ny olon-droa fa indrindra indrindra momban’ny ASA. Ataoko angamba fa tsy misy olona tsy mitady izany fahasambarana izany eto ambonin’ny tany. Samy mitady io fahasambarana io fa nefa kosa samy manana ny hamaritany ny fahasambarana: ao ny manankarem-be, ny manana sipa tsara tarehy na tsara fanahy na koa hoe fidèle. Ny an’ny sasany rehefa mifankatia ny ankohonany, ny fianakaviany dia mahasambatr’azy ary ampy azy izay. Ny andaniny tsara karama amin’ny orin’asa dia ny ankilany manana ny orin’asany manokana.
Bref, samy manana ny andikany an’io fahasambarana io ka izay indrindra mahatonga ny mpifankatia tsy milamina intsony na ny mpivady izay nilokaloka tery ambonin’ny otely fa hoe tiako ianao, miara-mandidy sns dia aveo ny zaza no sisa itambarana fa satria tsy mahatsapa fahasambarana intsony, niova ny vadiko na ny olon-tiako de izao sy izao…
Miankina aminao ihany no mahasambatra anao fa tsy ny hafa na ny zavatra hafa
Ny olona tsirairay avy ireo dia nomen’Andriamanitra fo, nomeny saina handinika ary samy manana ny nofinofiny ka tsy misy olona afaka ahatakatra ny tena ao anatinao ao. Na dia asehonao azy aza izany na koa lazainao hoe zao sy izao no tiako ka mahasambatr’ahy. Tsy misy tena mahafantatra ny hasambarana ilainao sy ny nofinofinao na dia ny zanakao eritretinao tena fantatrao tsara io aza dia tsy ahinao ny any anatiny any, izay miseho ety ivelany ihany no interpreter-nao.
Raha ity zavatra miovaova ety ambonin’ny tany ity no hanankinanao ny fahasambaranao: ny vola, ny namana, ny vady, ny vatanao, ny toetrandro, ny fahsalamana sns bobaka be dia hoiziz aho aminao hoe: « perte letsy elah na perte letsy ndry! »
Raiso an-tanana ny fahasambaranao
Taloha zaho dia nankiniko tamin’ny olon-tiako izany fahasambarako izany any ka ady lava no miseho. Satria na dia efa noteneniko oe izao sy izao no tiako dia mbola tsy nataony foana. Any ka lasa gardien ny fahasambarana ny tena. Miambina foana ny zavatra zay ataony dia lasa matsatso ny fitiavana dia aveo maty. Fa rehefa nanapa-kevitra aho hoe horaisiko an-tanana izany fahasambarako izany dia na zavatra kely nahatezitr’ahy taloha aza lasa nahafaly ahy.
Bref, ny olana amin’ny fianan’ny mpifankatia mantsy na koa ny mpivady dia samy manana ny nofinofiny, samy manana noeritreretiny @ izany fahasambarana izany dia mifamolaka hoe: ito nenah tsy maintsy tanterahina, ito ny tiako ataonao. Dia mifanandrina foana ny roa tonta mandrapaha-resy ny iray ka mandefitra tsy fidiny noho ny fifamatorana efa natao ohatra na koa ny henatra amin’ny fiaraha-monina amin’ny fisaraham-bady na koa noho ny zanaka dia hiafiana eo. Dia ahoana izany raha efa lehibe ny zaza???
AMOUR et RESPECT tadidio io fa antoky ny fahasambaranao sy ny olona miaraka aminao io.
Fa ny sasany amintsika dia milaza fa tsy mahatsiarao fahasambarana mihitsy satria:
– Tsy tia ahy intsony izy
– Diso fanantenana amin’ny vadiko aho
– Mafy loha loatra ny zanako
– izaho marary lava
– izaho tsy manam-bola
– fa mangatsika lotra ny andro fa aleo ihany ny lohataona
– Mandreraka ny fahavaratra fa aleo ihany ririnina
– Ambanimbanian’olona foana aho
– Ratsy tarehy aho fa tsy otran’ny sipa iray atsy
– Mihatsara velatsihy amiko ny namako, ny havam-badiko
– Kely karama ny asa fivelomako
Ny tiana ambara amin’izany, raha te hiaina ny fahasambarana tokoa ianao dia raiso an-tanana. Aza ankinina amin’iza n’iza ny fahasambaranao na sipanao, na ny vadinao na ny namanao n’iza n’iza. Ka na tsisy n’ino n’inona ao antranonao na koa feno entana dia sambatra foana ianao, na kely karama na be dia sambatra foana, na dia tsy tianao izy dia sambatra foana ianao.
Dia izao koa no tadidio efa expérience hitako ary mbola iainako, rehefa mahatsiaro sambatra ianao dia manantona hoazy ny zavatra tsara rehetra ary rehefa malahelo ianao dia manantona hoazy ny ratsy rehetra. Ny tsy manam-bola indray mbola misy depense tsy maintsy aloha tampoka… Na io asa azohanao io 80.000 ar io miteraka fahasambarana hoanao amin’izao, dia hotonga 800.000 ar hatramin’ny 8.000.000 ar io amin’ny fotoana tsy ampohizinao.